IGLTA Convention Global oo lagu qaban doono Milan Oktoobar 26-29
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » LGBTQ » IGLTA Convention Global oo lagu qaban doono Milan Oktoobar 26-29
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • LGBTQ • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Aroosyada Jaceylka Malabka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Magaalada Milano waxay sugaysaa soo dhaweynta IGLTA. Waxay noqon doontaa fursad qaas ah oo lagu soo dhoweeyo bulshada LGBTQ+, wadista iyo xoog togan ee warshadaha dalxiiska. Milano waxay soo bandhigi doontaa hab -dhaqankeeda loo dhan yahay, iyada oo u adeegsanaysa bulshada maxalliga ah si ay daqiiqad kasta oo IGLTA ah uga dhigto khibrad Milanese u gaar ah.
Ururka Socdaalka Caalamiga ah ee LGBTQ+ wuxuu ku laaban doonaa Yurub xafladdiisii ​​ugu horreysay Oktoobar 26-29, 2022.
Heshiiska, oo ah dhacdada ugu weyn ee waxbarashada iyo isku xirnaanta ee dalxiiska LGBTQ+, ayaa noqon doona shirweynihii ugu horreeyay ee Yurub tan iyo Madrid 2014.
Dhacdadan ayaa markii hore loo qoondeeyay 2020, laakiin waxay ahayd in dib loo dhigo sababtuna tahay masiibada COVID-19.
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka LGBTQ+ wuxuu Milan u keeni doonaa Shirweynihii 38aad ee Sanadlaha ahaa ee Caalamiga ahaa, 26-29 Oktoobar 2022. Shirweynihii, dhacdadii ugu horreysay ee waxbarashada iyo xiriirinta dalxiiska LGBTQ+, ayaa noqon doonta shirweynihii ugu horreeyey ee ururka ee Yurub tan iyo Madrid 2014. Dhacdadu markii hore loo qoondeeyay 2020, laakiin waxay ahayd in dib loo qorsheeyo masiibada darteed.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan ugu dambayntii awoodno inaan u dabbaaldegno iskaashigayagii muddada dheer, guulaha leh ee aan la leenahay Talyaaniga, oo aan ku soo bandhigno Milan, oo ah magaalada ugu soo dhoweynta badan LGBTQ+ IGLTA Madaxweyne/Maamule John Tanzella. “In kasta oo dib -u -dhigyadu ay ahaayeen kuwo niyad -jab leh, haddana shirka furmi doona wuxuu noqon doonaa mid macno badan u leh meesha loo socdo iyo xubinimadeena. Shirku wuxuu diiradda saari doonaa istiraatiijiyado ganacsi oo loo dhan yahay iyo fursadaha isku xirnaanta si loo taageero guulaha warshadeena mustaqbalka. ”
Qorshayaasha Talyaaniga ee IGLTA waxay ku jireen shaqooyin muddo saddex sano ah iyagoo kaashanaya ENIT (Guddiga Dalxiiska Qaranka Talyaaniga), Magaalada Milan iyo AITGL (Ururka Talyaaniga ee LGBTQ+ Dalxiiska), waxayna ka dhici doontaa UNAHOTELS Expo Fiera Milano. Shirweynaha Caalamiga ah waxaa ka mid noqon doona Goobta Iibiyaha/Alaab-qeybiyeyaasha, iyadoo lala kaashanayo Kooxda Warbaahinta Jacobs ee UK, oo ka kooban ballamo hal-hal ah, iyo sidoo kale fadhiyo waxbarasho iyo dhacdooyin kale oo xiriirineed.
“Waligeen kamaan tanaasulin ballanqaadkeenii ahaa keenista IGLTA Milan, ”ayay tiri Maria Elena Rossi, Agaasimaha Suuqgeynta iyo Horumarinta, ENIT. “Sannadka 2022, ka -qaybgalayaasha IGLTA waxay ka heli doonaan hal -abuurnimo dheeri ah dalabyada dalxiiska iyo in xoogga la saaro khibradaha tayada leh ee mideeya Milan iyo nawaaxigeeda. Iyada oo lala kaashanayo shabakadooda xirfadleyda dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha fikirka waxaan hubin karnaa dhacdo guul leh. ”
Luca Martinazzoli, Maareeyaha Guud, Milano & Partners ayaa yiri "Magaalada Milano waxay sugeysaa soo dhaweynta IGLTA." “Waxay noqon doontaa fursad qaas ah oo lagu soo dhoweeyo bulshada LGBTQ+, wadista iyo xoogga togan ee warshadaha dalxiiska. Milano waxay soo bandhigi doontaa dabeecaddeeda loo dhan yahay, iyada oo u adeegsanaysa bulshada maxalliga ah si ay daqiiqad kasta oo IGLTA ah uga dhigto khibrad Milanese u gaar ah. ”
Alessio Virgili oo ka tirsan AITGL ayaa yidhi "Shirkan Talyaaniga wuxuu fure u noqon doonaa hore u socoshada adduun cusub oo ah socdaalka masiibada kadib." “Horumarinta safarka LGBTQ+ iyo martigelinta dhacdadan waa ganacsi iyo fursad waxbarasho oo u gaar ah Talyaaniga iyo warshadaha socdaalka ee maxalliga ah. Wadanku wuxuu ka helaa 2.7 bilyan oo yuuro safarka LGBTQ+, waxaanan ku faraxsanahay in dhacdada IGLTA ay ganacsiyadeena siin doonto agabkii ugu wanaagsanaa ee lagu soo dhaweyn lahaa, si aan u sii wadno kobcinta suuqan Milan iyo Talyaaniga oo dhan. “
Laga soo bilaabo 1983, Shirweynaha Caalamiga ah ee IGLTA wuxuu ku jiray liistada ay tahay in la xaadiro ee loogu talagalay noocyada safarka ee danaynaya suuqa LGBTQ+. Ururku wuxuu dhowaan marti-galiyay shir-shaqsi shaqsiyeed guul leh oo la xoojiyay amniga iyo hab-raaca caafimaadka markii ugu horreysay tan iyo markii masiibada bilaabatay. Shirweynaha Caalamiga ah ee IGLTA wuxuu siiyaa aragti weyn magaalada martida loo yahay xirfadlayaasha dalxiiska ee LGBTQ+ adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan la -taliyayaasha safarka, hawl -wadeennada dalxiiska, saamileyaasha, iyo wakiilo ka socda hoteellada iyo meelaha loo safro.